Wikipedia:Momba ny fampiasana ny sary - Wikipedia
Wikipedia:Momba ny fampiasana ny sary
Ito takelaka ito no mampiseho ireo dingana arahina rehefa mampiditra sary ato amin'ny Wikipedia.
Ny zavatra tena sarotra dia ny hahafahana miaro ny Wikipedia eo anoloan'ny mety ho fanenjehana vokatry ny famoahana sary misy zo. Noho izany, mba ho azo ampidirina ato amin'ny Wikipedia, ny sary rehetra dia tokony hanaraka ireto fepetra ireto:
azo avoaka malalaka (titre commercial na tsia)
azo ovaina malalaka (titre commercial na tsia)
ary ireo sary navoaka na novaina dia tokony hanaraka ihany koa ireo fepetra ireo
Zo handika vitsivitsy ihany no mamaritra an'ireo fepetra ireo. Ny tompon'ny sary no afaka manapa-kevitra ny ho zo hapetrany ho an'ny sary. Raha toa ka tsy manana izany zo izany ianao amin'ny sary dia mifandraisa amin'ny tompon'ny sary mba hanaovany fanomezan-dalana manaiky ireo fepetra eo ambony ireo. Raha manaiky izy dia afaka mandefa ny dika mitovin'ny fanomezan-dalana amin'ny adiresy imailaka permissions AD wikimedia.org.
Ny sary rehetra izay tsy mampiseho, ao amin'ny mombamomba ny sary, ny zo ilaina dia azo atolotra hofafaina. Ho ao anaty lisitry ny Sary hofafaina mandritra ny fito andro ny sary mandram-piandry ny fanapahakevitra iraisana.
Tsy afaka mametraka sary mirohy avy any ivelany ato amin'ny Wikipedia. Izany dia mba hamerana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny sary, ny fiarovana ny zon'ny mpamorona, ary ny mety ho olana eo amin'ny fahatapahan'ilay rohy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Momba_ny_fampiasana_ny_sary&oldid=808861"
Dernière modification le 8 Novambra 2017, à 10:35
Voaova farany tamin'ny 8 Novambra 2017 amin'ny 10:35 ity pejy ity.